Rabshadaha ka socda Qudus iyo ceebaha ka taagan – Kasmo Newspaper
Rabshadaha ka socda Qudus iyo ceebaha ka taagan
Updated - July 23, 2017 4:51 pm GMT
London (Kasmo), Kacdoonka dadka Falastiin waxaa si joogto ah u cabburiya ciidammada Israel, laakiin Warbaahinta reer Falastiin waxay dambi ka saaraysaa arrintaas Masar iyo Sacuudi Carabiya.
Maqaal ku soo baxay Wargayska Palestine Chronicle oo ka mid ah Baraha ugu magaca dheer Warbaahinta Falastiin, lagana maamulo Urur an dowli ahayn ayaa si weyn loogu dhaleecaynayaa labadaas dal.
“Sida ayan Sacuudiga iyo Masar uga damqanayn waxyaabaha ka socda Masjidka Al-Aqsaa iyo mouwqifkooda xiriirka habacsanaanta ah ee Israel ayaa wax laga xishoodo ah, labada dal waxay iska dhigaan dad u taagan difaaca Muslimiinta, laakiin sidaasi ma ahan. Labadu, wax tillaabo ah kama qaadin go’aankii Israel uga horjoogsatay dadka in ay ku cibadeystaan Masjidka Barakaysan ee Al-Aqsaa”.
Dhaleecaynta damiiriga ah ee Warfidiyeen Daa’uud Cabdullah qalinka ku duugay, wargayskuna la wadaagay waxay marka hore ku socotaa hoggaanka Diiniga ah ee Masar iyo Sacuudi Carabiya.
Marka labadna xukuumadaha ka taliya dalalkaas oo Wargaysku u haysto in ay u adeegaan Maraykanka, ilaa ay lumiyeen dareenkii dhibaatada dadka reer Falastiin. Ereyada warfidiyeenku adeegsaday waa kuwo aad u qallafsan oo an wax faallo ah u baahnayn.
“Taariikh ahaan Hay’adaha Diiniga ah ee 2dan dal waxay waligood u shaqeeyaan si ay u raalli galiyaan madaxdooda siyaasadeed, kuwaas oo an tillaabsan Karin Maraykanka la’aantiis”.
Maqaalku wuxuu ka tarjumayaa mid ka mid ah dhaleecayntii ugu weynayd oo waayadaan dambe loo jeediyo Sacuudi Carabiya, taas oo, sida Warfidiyeenku caddeeyay, markii ay jilbaha qabsatay Maraykanka, Congress-ku ku eedeeyay weerarradii 9/11 ee New York.
Marka si dhab ah loo dhuuxo dulucda maqaalka waxaa laga garan karaa sida safka Islaamku u kala qaybsanyahay, ma ahan diin qur ah oo Shiico iyo Sunna isku hayaan, ee waa xitaa siyaasad ka dhex jirta Sunnada gudaheeda.
Waxaa kale oo laga garan karaa jahwareerka hab-dhaqanka sacuudiga oo fududeynaya xagjirnimada, waayoo dhinac wuxuu ka soo horjeedaa hab-nololeedka reer Galbeedka. Dhinaca kalena wuxuu u adeegaa danaha Maraykanka, taas oo dhallinyaro fara badan ka caroodaan siyaasadda arrimaha dibadda dalkooda, una arkaan munaafiqnimo an la aqbali Karin
Caradaas joogtada ah waxay soo jiidataa dhaga-nuglaanta dicaayadaha ururrada argagixisada Daacish iyo Al-Qacida, kuwaas oo had iyo jeer is waafajiya mabaadii’dooda iyo dhaqankooda siyaasadda, oo ah mid ka mid ah shuruudaha dhallinyarada lagu jiito.